इम्युनिटी बढाउन के गर्ने ? जानीराखौं - साक्षी खबर इम्युनिटी बढाउन के गर्ने ? जानीराखौं - साक्षी खबर
इम्युनिटी बढाउन के गर्ने ? जानीराखौं
बैशाख १६, २०७८ | २६७ पटक पढिएको
कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बचाउने भनेको इम्युनिटीले नै हो। शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो भए महामारीको जोखिमबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले कोरोनाबाट बच्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो हुनु आवश्यक छ।
इम्युनिटी बढाउनका लागि मेवाको सेवन गर्नु राम्रो मानिन्छ। मेवामा म्याग्नेशियम, पोटाशियम, क्याल्शियम, फाइबर, कपर र अन्य थुप्रै एन्टीअक्सिडेन्ट हुन्छ। यसको सेवनले इम्युनिटी बढ्नुका साथै थुप्रै बिरामीबाट जोगिन सकिन्५।